Ireo mpamokatra mitsoka menaka miady amin'ny menaka - China mampihena ny famokarana fitaovana famokarana atodinaina
Genera Fampidirana * Ity andalana famokarana ity dia misy ny extruder skru iray, ny bobon-taolana mientanentana ary ny fantsom-pifindrana, milina fanamafisana… sns. * Fitaovana feno avy amin'ny famahanana materialy hatrany amin'ny fofonaina vita amin'ny lamba vita amin'ny lamba, teknolojia matotra, mihazakazaka tsara, mety hahatratra 95 ary ho ambony ny PFE. * Ny fahaiza-mamokatra avy amin'ny 1500kg, ny fahafaha-manao famokarana marina dia miankina amin'ny milina extruder ary mampihena ny haben'ny bobongolo. Parameter ara-teknika 1.Model: HL-1600 2.Produksi: Fantsom-bolo miaka-midina 3.Voltag ...
Ny tsindrona mivantana sy ny tsipika famokarana miverimberina vita amin'ny meltblown ho an'ny mpanjifa misy karazana voafaritra manomboka amin'ny 400mm-1600mm. Ny tsipika famokarana famokarana ampiasaina dia tsy ampiasaina ho an'ny famokarana lamba meltblown ihany, fa ho an'ny famokarana fitaovana fanivanana ranon-javatra sy fitaovana fanivanan-drivotra. Ireo fitaovana fanivanan-tsolika dia ampiasaina amin'ny sehatry ny fikarakarana ny rano, ny indostrian'ny solika ary ny simika simika, miaraka amina firafitra mitovy, ny filamatsy filtration avo, ny vokatra miharihary, ary ny po mahery ...
Ny fitaovana fanampiana lehibe indrindra amin'ny andalana miempo sy manaparitaka dia ny lafaoro maty maty. Aorian'ny famokarana mandritra ny fotoana iray dia hitranga ny fahalotoan'ny plugging hole. Amin'izao vanim-potoana izao, dia mila soloana ny otrikaretina maty. Ny tifotra maty fanosotra dia tokony hotifirina hanaisotra ireo polim-bary sisa tavela sy ny loto amin'ny lohany maty. Matetika roapom-bary sy boribory no roahina mba hanesorana ny polimim-bary sisa sy ny loto. Ary ny akora manta ao amin'ny melt -...